I-GOG.com Ibuyela Ezimpandeni Zayo Ngelabhulali 'Ekhethwe Ngokucophelela' Yemidlalo Yamahhala Ye-DRM - 【Ukuqhathanisa】 2022
I-GOG.com ibuyela ezimpandeni zayo ngomtapo 'okhethwe ngokucophelela' wemidlalo yamahhala ye-DRM
I-Kincown [Isibambi ende esine-GOG Clip Yokudla, I-Scoop for Cat, Isikophu Sokulinganisa Sokudla ...
Sisanda kufunda ukuthi i-GOG.com ilahlekelwa yimali futhi inqume ukushintsha inkambo ngokufanele, ibuyele ezimpandeni zayo.
Isitolo sedijithali, esiphethwe yi-CD Projekt, sithatha indlela ehlukile ngokubuyela kufilosofi yaso yasekuqaleni yokugxila ekukhethweni okuncane kwemidlalo ye-PC engaphazanyiswa yinoma iyiphi isofthiwe ye-DRM.
Njengoba i-The Verge yaphawula, i-CD Projekt CFO Piotr Nielubowicz yaphawula: “Uma kuziwa ku-GOG, ukusebenza kwayo kunenselele, futhi muva nje sithathe izinyathelo zokuthuthukisa isimo sayo sezezimali.
“Okokuqala, sinqume ukuthi iGOG kumele igxile kakhulu ebhizinisini layo eliwumgogodla. U-Nielubowicz wachaza: “Okusho ukunikeza ukukhetha kwemidlalo ekhethwe ngokucophelela ngefilosofi yayo ehlukile ye-DRM. Ngokwale ndlela, kuzoba nezinguquko ekwakhiweni kweqembu.
Qaphela ukuthi abanye onjiniyela bazohoxa emisebenzini ye-GOG.com kulandela izindaba zokulahlekelwa cishe kwesigidi esingu-1,14 (cishe ku-€ 850,000 noma i-AU € 1,6 million) emiphumeleni yabo yakamuva yezezimali (nakuba yonke inzuzo inyuke kancane).
Ukuhlaziya: Ubuyela ezikhathini ezinhle?
I-GOG.com iyasuka esu layo lakamuva elibanzi lokuzama ukuncintisana nezinkundla ezinkulu zemidlalo ye-PC ye-inthanethi, okuyi-Steam ne-Epic Games, futhi igxile kulokho okuyenze yaduma kwasekuqaleni.
Lena imidlalo yamahhala ye-DRM, kunjalo - i-DRM isadonsa ukucasuka kwabadlali abaningi - kanye nezakudala ze-PC ukuthi ziqale (khumbula ukuthi i-GOG imele "Imidlalo Emidala Emihle") eguqulelwe ukusebenza kuma-PC anamuhla. , ngethemba lokugwema noma yikuphi ukukhungatheka okungaba khona ngezinhlobo zezinkinga ezingase ziphakame ngezihloko ezindala nezinto ezintsha. Muva nje, sibone i-GOG.com inikezela ngezihloko ze-Star Trek zakudala njenge-Bridge Commander yango-2002 (efakwe nesichibi v1.1).
Sekukonke, leli su elisha limelela umnyakazo oqondakalayo, futhi empeleni, i-GOG.com ibilokhu ihlafuna kakhulu emzamweni wokuncintisana nabafana abakhulu, ikakhulukazi uma i-Epic imatasa ilahla ithani eliphelele lemali. (Fortnite) kumageyimu amahle njengezipho zokuheha abasebenzisi abasha.
Ngethemba, i-GOG.com ingakwazi ukuzisungula kabusha ngempumelelo i-niche enenzuzo eyengeziwe endaweni yokudlala ye-PC, ngoba thina, nabanye abaningi, sifuna ukuthi ihlale.
Iziphesheli zanamuhla ezihamba phambili ze-PC